Digniin Ku Socota Bakipress.com « CEELBARDAALENEWS.COM
« Waxan garan lahay Nacaybka Khadar Saleeban Dhuxul Iyo Been abuurkiisa !!!!
Hambada Reer Karbala(Isaaq) Ayaa ku Hurda Dhabta Rayaale.Kulmiyana waa Nazi »
Digniin Ku Socota Bakipress.com
Qoraalkan yar ee gaaban waxan u dirayaa, shabakadda la baxday Bakipress.com, oo maamulaheedu caddaysatay xumaan, aflagaado, qabiilaysi iyo in ay si badheedh ah u isticmaalaan sawirro aanay oggolaasho u haysan, taasi oo ku keeni doonta in ay hor yimaaddaan sharciga saxaafadda, oo hadhawna xukunkeedu noqon doono ganaax aanay ka bixi karin. Haddaba, aniga oo marka hore ka bilaabaya maqaal fool xun oo ay dhawaan ku soo nashriyeen shabakadda bakipress.com, kaasi oo ay ugu magac dareen CALI XAAMUD OO UGU FADALLO CAD DADKA CARRABKA LAGU HAYO…..waxa ku jiray sawir laba nin ah, oo nasiibdarro aan mid ka mid ah ahay( haddii aan Ahmedweli ahay). Markii aan ku arkayna aad ayaan ula yaabay sababta sawirkayga loo jeclaystay in maqaallo la iskaga soo dhejisto iyada oo aanan wax amar ah la iga haysan, sidoo kale ma jeclaysan maqaal noocaasi ah in uu sawirkaygu ku soo baxo. Maqaalkaasi oo weliba lagu aflagaadaynayey rag agtayda ku leh sharaf iyo maamuus.
Waxa iyana layaab igu noqotay,mar aan isku dayey in aan maamulka shabakadda la xidhiidho oo uu ii bixi waayey e-mailka beenta ah ee ku qoran bakipress.com. Welina waxa aan ku raad joogaa dadkii qoray iyo kuwa ku soo nashriyey shabakaddan.Taasi ayaana igu kalliftay in aan saxaafadda u mariyo farriintani. Waxanan u sheegayaa oo aanan ka baryeyn in ay sida ugu dhakhsaha badan sawirkayga uga saaraan mawduucaa. Isla markaana aanay sawir aan leehay ugu soo dejin shabakaddaasi. Haddii ay muddo afar iyo labaatan saacadood ah kaga saari waayaanna anigu mas’uul kama ihi, wixii ka yimaadda.
Waxanan joogaa dal horumarsan oo aan ka heli karo jannallo badan oo loo maro sidii la isku difaaci lahaa, ee weliba loo aarsan lahaa. Sidaasi daraaddeed, shabakaddan ka maamulow amma Uk joog amma Canada amma Maraykan amma dhulkii hooyo. Hawshaa aan ku faray adiga ayey kuu taallaa.
Kuwa cayda iyo aflagaadada qalinka u qaatay ee caadaystay in ay qoraan xumaanta iyo cayda waxan u sheegayaa in aanay fiicnayn, oo aad abuurayso uun xumaan iyo nacayb. Laakiin aanad cidna waxba ku yeelayn. Haddii lagula ficiltimana aad adigu u itaal yar tahay….i arkay i arkayduna ay ku dambayn doonto i qariyaay. Sidaasi daraaddeed malaha waxa kuu fiican inta aanad dhagaxa tuurin in aad hubsato guriga aan ku jirto.
Saaxiibadayda kale ee aanan dhibtooda jeclay, laakiin tuhunku igaga jirana waxan leehay ha moodina in aanay waxba hadhin…it is not the end of the world….shaxda aad ciyaaraysaanna si fiican u cayaara, iskana ilaaliya in aad cidlo u baxdaan.Ogaada in ay fiican tahay in wax la iskula hadho, oo aan xarragada laga tegin. Haddaydaan ka tanaasulin xumaanta oo aydaan sidan baddalinna, waxa iman doonta in aad aragtaan wax aydaan filayn.
Ahmedweli Goth, UK
This entry was posted on October 19, 2009 at 10:24 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.